Noocyada qolalka beddelaadda | Ragga Stylish
Waxay kuxirantahay munaasabada, duruufaha ama dhacdada, waxaan leenahay afar nooc oo dharka labiska aasaasiga ah: anshax, rasmi, rasmi ah iyo isboorti.
Dharka dharka tag, dhacdooyinka waaweyn, galas, xaflado; Qolka labiska rasmi ah Munaasabadaha gaarka ah; Qolka labiska aan rasmi ahayn in la beddelo nidaamka joogtada ah iyo dharka cayaaraha, kuwa ugu raaxada badan uguna raaxada badan.
Maalintii wuxuu xidhaa jaakad subax ah, habeenkiina khamiis. Tuxedo wuxuu ku fiican yahay habeen iyo maalinba. Laakiin waa inaanan ilaawin Spain dhexdeeda tuxedo waa dhar xisbi, ma ahan xaflad xaflad. Koodhku wuxuu u oggolaanayaa qurxinta in la soo bandhigo. Suudhka subaxda ayaa u oggolaanaya wax yar, in kasta oo ay ka fiican tahay inaadan xirneyn wax. Kabaha, sifiican ugu xir xiran xargaha waxayna kuxirantahay dharka dharka lagu xidho, waa in laga sameeyaa maqaar patent ama wax lamid ah, ama xargo madow (dharka dharka madow ee ugu fiican).
Si rasmi ah
Dharka caadiga ah ee mugdiga ah ee midabada la gooyey iyo midabbada, doorbidayo jilicsan, shaati cad oo lagu dari karo suudhkaaga iyo xirmooyinkaaga Qalabka, wax yar laakiin tayo leh. Isku xirayaasha, saacadaha, giraanta, silsiladda iyo wax kale oo yar. Kabaha, goynta caadiga ah, in kasta oo naqshado cusub loo oggol yahay sida kabaha suun halkii xargaha laga xidhi lahaa.
Jaakadaha dabacsan ayaa ah dhammaystir habboon oo lagu daro surwaal kala duwan. Waxa kale oo jira isku-dhaf aad u qurux badan oo leh noocyo kale oo dhar ah sida surwaal, shaati iyo funaanad. Kabaha ayaa la toli karaa ama qaab kale oo casri ah oo aan lahayn xargo leh xirmo kala duwan, gaar ahaan buckles.
Funaanado, funaanado si caadi ah loo jarjaray, joonisyo, corduroy iyo dharka kale ee casriga ah ee la jarjaray ayaa ah waxa na siiya hawo ciyaareed ama hawo aan caadi ahayn, taas oo loo isticmaalo in badan oo loogu baxo miyiga ama si fudud maalin qurux badan loogu qaato buuraha ama badda. Kabaha ugu kala duwan ee laga helo T-shaati-yada caadiga ah, kuwa badda, moccasins ama nooc kasta oo kabo raaxo leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Calzado » Noocyada qolalka beddelaadda
Waxaan dareemayaa inay u baahan tahay sharraxaad yar
soraida pamela iyo rosillo dijo
waa inay sii dhejiyaan
Jawaab soraida pamela y rosillo